RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Xidig Kooxdeeda Muhiim Ka Ahi U Diiday In Uu Kooxda La Safro. - Gool24.Net
RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Xidig Kooxdeeda Muhiim Ka Ahi U Diiday In Uu Kooxda La Safro.
Kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in difaaca kooxdeeda ee Laurent Koscielny uu iska diiday in uu la safro kooxda inteeda kale waana dhibaato kale oo ku habsatay kooxda Gunners oo markii horeba la daalaa dhacaysay dhibaatada suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Laurent Koscielny ayaa la sheegay in uu dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyay maamulka kooxdiisa Arsenal ka dalbanayay in si laba dhinac ah ay u kansalaan heshiiska uu kooxda ku joogo balse ayna taas dhegaysan maamulka Gunners taas oo keentay in uu hadda gadood sameeyay.
Laurent Koscielny ayaa doonaya in uu iskaga baxo kooxdiisa Arsenal wuxuuna diyaar u ahaa in uu qaab xor ah kaga dhaqaaqo Emirates Stadium oo ay kooxdiisa si wada jir ah heshiiska u kansalaan.
War saxaafadeedka rasmiga ah ee Arsenal ka soo baxay ayaa lagu yidhi: “Laurent Koscielny waxa uu iska diiday safarkeena US ee xili ciyaareedka ka horeeya. Waxaanu aad uga niyadjabsanahay ficilka Laurent kaas oo dhinac ka ah tilmaamahayaga cadaanka ah”.
Waxaana qoraalka Arsenal la si raaciyay: “Waxaanu rajaynaynaa in arintan la xalin doono isla markaana aanaan waqtigab ma bixin doonin faah faahin dheeraad ah”.
Warbaahinta dalka France ee uu Laurent Koscielny dhalasho ahaan ka soo jeedo ayaa shaaciyay in dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyay uu xidigani kooxdiisa Gunners ka dalbanayay in heshiiskiisa la burburiyo oo uu kooxda si xor ah kaga bixi karo.
Laurent Koscielny ayaa doonaya in laga sii daayo heshiiskiisa Emirates Stadium si uu koox kale si xor ah ugu biiro waxayna Gunners ka gaabsatay in ay faah faahin dheeraad ah ka bixiso sababta dhabta ah ee uu Koscielny u qaaday talaabada uu kooxda kaga hor yimid.
Unai Emery iyo ciyaartoyda kooxdiisa Arsenal ee u duulaya US ayuuna Laurent Koscielny qayb ka noqon doonin wuxuuna diyaar u yahay in uu maamulka Gunners ku qasbo in la fasaxo oo uu xor ku bixi karo.